အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး အထူးငွေတိုက်စာချုပ် (Bond) တွေကို ဒီနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂) နာရီအချိန်မှာ – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး အထူးငွေတိုက်စာချုပ် (Bond) တွေကို ဒီနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂) နာရီအချိန်မှာ ဝယ်ယူနိုင်တော့မယ့်အကြောင်း မျှော်လင့်စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
ငွေတိုက်စာချုပ်တွေ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာ စတင်ရောင်းချနေပြီ
2021-11-22 at 6:21 PM
Sai Htin Kyaw says:
မေအလိုး မင္းေအာင္လွိဳင္ says:
Kaday Kyaw says:
ဒီစစ်တပ် မသာပေါ်မှ ဘဏ်ထဲကငါတို့ငွေတွေပြန်ရမှာ။ဝယ်ဖို့စောင့်နေတာ ကြာပီ။
Saw Shan Aung says:
ဝယ်ပုံ လေးကို ရှင်းပြပေးပါ
Âungsoe Moe says:
KO KO HTayy says:
မြန်မာငွေ တစ်ထောင်တန်မိန့်ခွန်းတောင် လူစေ့မဝယ်ကြတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်ဘောမတွေက ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းနေတဲ့ NUG Bond အောက် ထွန့်ထွန့်လူးနေကြပုံများ။
Daw Wai says:
Lucas Kareng Sut says:
Coming Soon ပဲျပတယ္
ေဒၚေရႊ စု says:
ကိုယ္စားလွယ္ယူေရာင္းေပးရင္ အက်ဳိးေဆာင္ခ ေပးလား ?
ဒါမွမဟုတ္ အဲစာခ်ဳပ္ပိုင္ဆိုင္သူဟာ အေမရိကန္ကို ဗီဇာမလို ဝင္ခြင့္ရလား ?
ပ႐ိုမိုးရွင္းေလး လုပ္ေပးပါအုံး ေၾကညာေပးမယ္
Zar Zar Lin says:
ေအာ္ ဝယ္လို႔မရေသးတာလား တို႔ဝယ္မရတာမ်ားလားလို႔ ေစာင့္ေနတာၾကာေပါ့
Nai Nina says:
My friend ထဲက ေဘာစိေတြ ညီကိုေတြ အစ္မညီမေတြ အားလံုး ကိုယ္တတ္နိုင္သေလာက္ဝယ္ေပးၾကပါအူး မအလေတြမ်ိဳးျပဳတ္ေစခ်င္ပီ
၁၀လလောက်စောင့်လာပြီးပြီ အေးဆေးလုပ် အဆင်ပြေဘို့လိုတာ
Khaing Htoo says:
Sine Sine says:
Shazana Shazana says:
Mg Zaw says:
အောင်မြင်ပါစေ ငါတို့ရဲ့ NUG
Linn Nay Minn says:
my friend ထဲကဘောစိတွေ ဝယ်ပေးကျပါဦးဗျ
ကျုပ်တို့onlineမှာ ဝယ်ဖို့တန်းစီနေတာ မနက်လေးနာရီကတည်းကဗျ
Zin Min Thant says:
မဝယ်နိုင်ပဲ ဟောင်နေတဲ့ ဟိုဘက်ရက်ကွက်က ဟာဒေ ခု ထွက်ကြဇမ်း☺️☺️☺️
မမ နေခြည်ဦး says: